Xikmado Iyo Murti Qiimo Badan | Hangool News
Xikmado Iyo Murti Qiimo Badan
Hargeysa:– 1. Kama dhigi kartid kumana qasbi kartid qof inuu ku jeclaado. Waxa aad sameyn karto waa in aad noqoto qof la jeclaado. Wixi soo hara iyagay u taal
Calaamada Qaangaarnimada dhabta ah waa markii qof ku dhibaateeyo ka dibna aad isku daydo in aad xaaladooda fahanto iyo waxa ay sidan u sameynayaan inti aad isku dayi lahayd in aad ka aargoosato
Si taxadar leh u dhageyso sida qof u hadlo kolkuu qof wax kaaga sheegayo qof kale. Tani waa sida ay kaaga waramayaan markey dad kale kaala hadlayaan
Maalintu in ay kuu noqoto mid kheyr oo danahaaga kuu wada qabsoomaan waxay ku xiran tahay subixi markaad hurdada ka toosto wixi aad ku bilowdo; halki aad ku bilaabi lahayd fb fiirin, email ka jawaabid, war dhageysasho, ku bilow Allihi ku siiyay fursada labaad nolosha in aad u sujuudo, xusto, ku shugrido, aadna duceysatid
Mar kasta aadan fahmin dhibta nolosha ku heysata, indhaha isku qabo, neefso, gacmaha kor u taag, ka dibna dheh: “Ilaahow waan ogahay in wax kasta qorshahaaga ku socdaan, wax kastana sabab ku dhacaan, Ilaahow iga caawi sidi aan uga gudbi lahaa marxaladan”
Ha murugoon hadii dad aad abaal badan u gashay kugu jisaaraan ama cadow kugu noqdaan. Xusuuso, Alle oo dadkan abuuray, nimco badan siiyay, ayay in badan ku caasiyeen, aysan adeecin awaamiirtiisa. Maxaad filaysaa adigoo ah maskiin daciif ah?
Waa caafimaadka waxa ah hantida dhabta ah ee ma aha xoogaa dahab ah ama lacag ah. Lacagtu waxay kuu iibin karaan sariir qaali ah laakiin kuuma iibin karto hurdo iyo si nabad ah inaad ugu seexato. ku dedaal daryeelka naftaada
Haddii adigoo ah Nin Xaas leh, aad is aragto inay aad kuu soo jiitaan Gabdhaha School-ka dhigta, Xaaskaaga u iibi dharka Schoolka.